Microfleece Jacket, Zip Pullover, Jacket Ezemidlalo - DONGFANG ukunitha
Polar eboyeni ibhatyi DFP-027
Eboyeni MICROPOLAR jacket DF19-115A
Polar eboyeni ibhatyi DFP-019
Ibhatyi manzi DFCF-004
Ijezi-nye waba seboyeni DFC-012
Ijezi-nye waba seboyeni DFC-009
Soft-Shell ibhatyi DFS-028B
Soft-Shell ibhatyi DFS-024
Jiaxing Dongfang Knitting Dress Co., Ltd, owasekwa ngo-1980, i ezaziwayo-kakuhle ishishini ezithumela imveliso yazo kwiimalike elidibanayo uyilo yesinxibo, ukwenziwa ipleyiti, imveliso elungelelanisiweyo kunye neentengiso.
Le nkampani ibekwe kwi yezeKhaya Silk e China e Jiaxing City, kwiPhondo Zhejiang, ngokuhanjiswa elula, okusingqongileyo ophezulu kwanobuhle. Kuyinto kwicala ngasentshonalanga kuhola wendlela yephondo 07 kwiPhondo Zhejiang, kwaye kufuphi Zhajiasu expressway.
Le nkampani iye amalungelo self-inkxaso Rhweba ngaphakathi no Rhweba, nto leyo eza kunceda ukwandisa ngokubonakalayo imarike ekhaya nakumazwe aphesheya. Le nkampani iye umbutho ephilileyo, ulawulo standardised, anamandla zobugcisa kunye nezixhobo yobungcali, isebenzisa uyilo ingubo CAD phambili kunye nenkqubo nobeko. ikakhulu Siyathembisa imiyalelo yorhwebo langaphandle, impahla brand OEM processing, intsebenziswano brand kunye nezinye iinkonzo, kunye ingqalelo edlalwa ngaphandle kunye nempahla nje.
Sinento iqela imveliso nomgangatho elungileyo inkonzo esemgangathweni, engqongqo kunye nenkqubo yolawulo lwezenzululwazi, oqinisekisa ngempumelelo yaye uthembisa umgangatho wenkonzo yenkampani.
Bonke abasebenzi e Jiaxing Dongfang Knitting Dress Co., Ltd kundamkela bonke abathengi abatsha nabadala ekhaya nakumazwe aphesheya kutyelela ndibuze.
Soft Shell Nge Sherpa seboyeni Jacket , takwabipa Madoda eboyeni , sweater -Knit eboyeni , sweater seboyeni Jacket , sweater ukuluka seboyeni Jacket , Winter Mens Softshell elimathambo seboyeni Jacket ,